စစ်တပ် Times မှ Vets ကောလိပ်အတွက် ၂၀၂၀ အကောင်းဆုံးကို Hodges U အမည်ပေးခဲ့သည်
၂၀၂၀ အတွက်စစ်တပ် Times မှ Veter ကောလိပ်များအတွက်အကောင်းဆုံးအမည်ရှိတက္ကသိုလ်ဖြစ်သည်
Hodges တက္ကသိုလ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်ပြန်တွေကိုဂရုစိုက်ပါတယ်။ Military Times သည် Hodges University အား ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုစာရင်းတွင်ကောလိပ် ၁၃၄ ခုအနက်တစ်ခုအဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းသည်သဘောတူပုံရသည်။ ထို့အပြင်ဤသည်ဂုဏ်သတင်းကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့၏တတိယနှစ်ဖြစ်သည်။
ဘာကြောင့် Hodges သည် Vetering များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သနည်း။
၀ န်ထမ်းများအားစစ်မှုထမ်းဟောင်းများရှိသောကျွန်ုပ်တို့၏နေပယ်လ်နှင့် Fort Myers ကျောင်းများရှိ Dr. Peter Thomas စစ်ပြန် ၀ န်ဆောင်မှုစင်တာများကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။
ဘာကြောင့် Hodges U ဟာ Vets များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သလဲဆိုတာကိုပိုမိုဖတ်ရှုရန်ဆောင်းပါးတစ်ခုလုံးကိုဖတ်ပါ ဖလော်ရီဒါအပတ်စဉ်.
ဒေသတွင်းအသိအမှတ်ပြုထားသော၊ ပုဂ္ဂလိကအကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော ၁၉၉၀ တွင်တည်ထောင်ခဲ့သော Hodges တက္ကသိုလ်သည်ကျောင်းသားများအား၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်လူထုကြိုးပမ်းမှုများတွင်ပိုမိုမြင့်မားသောသင်ကြားမှုများကိုအသုံးချရန်ပြင်ဆင်ပေးသည်။ ဘွဲ့လွန် ၁၀,၀၀၀ ကျော်သည် ၉၃ ရာနှုန်းသောအလုပ်အကိုင်များဖြင့်အောင်မြင်မှုရရှိခြင်းနှင့်အတူ Hodges သည်မတူကွဲပြားသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူသင်ယူသူလူ ဦး ရေကိုဖြည့်ဆည်းရန်ထူးခြားသောဒီဇိုင်းနှင့်ဖြန့်ဝေသောအစီအစဉ်များကိုတီထွင်ခြင်းအတွက်အသိအမှတ်ပြုခံရသည်။ Naples နှင့် Fort Myers, Florida ရှိကျောင်းဝင်းများဖြင့် Hodges သည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သောနေ့၊ ညနေခင်းနှင့်ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းခွဲများမှဘွဲ့ကြိုနှင့်ဘွဲ့အတွက်ဘွဲ့အတွက်သင်ကြားပေးသည်။ ဟော့ဒ်စ်ကိုဟစ်စပန်းနစ်အမှုဆောင်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးဟစ်စပန်းနစ်ကောလိပ်နှင့်တက္ကသိုလ်များအသင်း (HACU) ၏အသင်းဝင်လည်းဖြစ်သည်။ Hodges တက္ကသိုလ်အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကရရှိနိုင်ပါသည် Hodges.edu.
Tags: စစ်ပြန်များအတွက်အကောင်းဆုံးကောလိပ်များ, HodgesU, ဝါရင့်ကောလိပ်များ, ဝါရင့်တက္ကသိုလ်များ